uphayinaphu uzihambela wodwa ngokudayisa - Ilanga News
Home Izindaba uphayinaphu uzihambela wodwa ngokudayisa
uphayinaphu uzihambela wodwa ngokudayisa
USUPHENDULE isilomo intombi eshelwa yisigodi sonke uphayinaphu ngenxa yokwanda kwabantu abazigayela utshwala emakhaya njengoba kuvaliwe ukuba budayiswe ezitolo ngenxa yokuvalwa kwezwe ukuzama ukunqanda ukusabalala kwe-coronavirus.
Lokhu sekudale ukuba ubize cishe ngokuphindiwe, wayodlula intengo kakwatapheya namazambane.
Ngaphandle kokuthengwa kakhulu kukaphayinaphu, ngemuva kwamasonto amane kuqalile ukuvalwa kwezwe (lockdown), kwavalwa nokudayiswa kwezinkukhu ezithosiwe, iningi labantu eNingizimu Afrika libonakale lisondela kakhulu emakhishini alo njengoba linge-nakho ukwenza ngenye indlela.
Yize kunjalo, wukudayiswa kukaphayinaphu okubonakala kuhamba phambili, obekuyinto ebeyingalindelekile. Lesi sitshalo esivele saziwa ezindaweni eziningi ukuthi senza utshwala obumtoti, abantu basuke befuna ukusihlanganisa nezithako ezinjengoshukela, yisikhukhumalisi (yeast), okuthi uma sekubilile kukhiphe utshwala obuvala isikhala nenxano.
Ngosuku lokuqala lokuvalwa kwezwe, mhla ka-26 kuNdasa (March), ezimakethe eziseGoli kwadayiswa uphayinaphu ongaphezulu kuka-10 000, kanti ngomhla ka-6 no-7 kule nyanga -sekusele isinsuku ezimbalwa nje kufike iPhasika – kwadayiswa olinganiselwa ku-60 000.
NgoMsombuluko odlule, zikhuphuke kakhulu izinombolo njengoba kubikwa ukuthi ungaphezulu kuka-90 000 uphayinaphu ogcine udayiswa ngosuku olulodwa nje vo.
Ukwanda kwesibalo sikaphayinaphu odayisayo sekuholele ekutheni ikhilo lawo ebeliwu-R12,50 likhuphuke lize lifike ku-R22.50 ngempelasonto edlule.
UMnu Jaco Posthuizen, oyiCEO kwaRSA Group, uthi ukuhlasela kwe-COVID-19 – edalwa yi-coronavirus – nokuvalwa kwezwe, kunomthelela omkhulu ekudayisweni kwezitshalo njengoba kubonakala kwenzeka nje kuphayinaphu.
Ukuvalwa kwezindawo zokudlela (restaurants) sekuholele ekutheni intengo yamazambane yehle njengoba bejwayele ukwenza ngawo ama-chips, ngokunjalo intengo kakwatapheya nayo yehlile.
“Uthola ukuthi uma singekho phezulu isidingo sokuthile, intengo yakho iyehla,” kusho yena.
Uthi njengoba sekuzovuleleka nakwezinye izindawo, unethemba lokuthi isidingo sezitshalo ezithile sizokhuphuka ngoba okwenzekayo ezitshalweni wukuthi oku-ngadayiseki kahle kugcina sekulahlwa ngoba kuyonakala.
UMnu Omri Van Zyl, ongumqondisi kwa-Agri-SA, uthi iNingizimu Afrika inenhlanhla yokuthi inohlelo olusebenza kahle ikakhulukazi embonini yezokudla.
Uthi kulindeleke ukuthi unyaka ka-2020 kube ngozoba nesivuno esiphezulu sommbila, okuzoholela ekutheni intengo yempuphu ibe phansi kakhulu.
Uthi yize kunjalo, kodwa kulindelekile ukuthi kukhona okuzoba wumthelela ongemuhle ngokuhlasela kwalesi sifo.
Phakathi kwabazoshayeka kakhulu, ngabalimi abathenga amakhemikhali athile njengoba bezoshaywa wukuba phansi kwerandi.
Previous articleSekukwamazitapele emzuvele
Next articleahlafuna ejeqeza amakhansela “asongelwayo”